Hiran State - News: HS:-Golaha Deegaanka Magaalada Beledweyne oo doortay Duqa Degmada
HS:-Golaha Deegaanka Magaalada Beledweyne oo doortay Duqa Degmada
HS:-Kulan siweyn loo soo agaasimay ayna ka soo qeyb-galeen mas’uuliyiinta ugu sareysa Hiiraan ayaa waxaa maanta ku yeeshay magaalada Beledweyne gollaha deegaannka, kuwaasoo markii ugu horeysay doortay Duqa magaalada Beledweyne doorasho ay isku soo taageen dhawr qofood oo reer Belet weyne ah.
Hogaamiyaha Hiiraan C/fitaah Hassan Afrah oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta maamulka gobollka ee kulankaasi goob jooga ka aheyd siweyna ul asocday qaabka ay doorashadu u dhaceyso, ayaa hadal uu u jeediyay xubnaha gollaha deegaanka magaalada belet Weyne waxaa uu sheegay in wax lagu farxo tahay doorashada noocan oo kale ah, isaga oo ku booriyay gollaha deegaanka degmada B/weyne in ay dar dar-galinta howlaha looga fadhiyo.
Doorashada Duqa degmada Beledweyne oo ay isku soo taageen ilaa Afar musharax ayaa ugu danbeytii waxaa cod gacan taag ah lagu ansixiyay Max’ed Xassan Nuuriye oo noqonaya Duqa cusub ee degmada B/weyne.
Ninkaas maanta loo doortay masuuliyadaan ayaa la sheegayaa inuu yahay nin howshaan ka soo bixi kara maadaama uu aad u yaqaano bulshada magaalada Belet Weyne oo ah goobtii uu ku dhashay kuna bar baaray.
Sidoo kale hogaamiyaha Hiiraan ayaa isla kulanka uga dhawaaqay guddoomiyayaasha degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobollka Hiiraan, isaga oo u rajeeyay in ay si hufan u gutaan waajibaadka saaran iyo sidii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen si siman oo ay daacadnimo ku jirto.
Marka la eego doorashada maanta dhacday iyo gudoomiyaha ay maanta doorteen gollaha deegaanka degmada B/weyne oo kulmiya guddoomiyayaasha xaafaddaha magaalada ay ka kooban tahay ayaa noqoneysa tii ugu horeysay oo ay bulshadu iyagu doortaan Duqa degmada B/weyne oo looga fadhiyo wax yaabo badan oo ay ugu horeeyaan inuu shir deg deg ah la yeesho gudoomiyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada.
Mar hadii la doortay duqa Belet Weyne waxaa muuqaneysa in dib loo howl galin doono shaqaalahii dowlada hoose ee magaalada Belet Weyne oo iyagu aad u ilaalin jiray bilicda iyo nadaafada magaalada.
Iskusoo duuboo maamulka cusub ayaa u muuqda mid maalinba maalinta ka danbeysa dar dar galinaya howlah aloo igmaday oo ay ugu horeeyaan nabadgalyada, dhismaha mustaqbalka dhaw maamul goboleed ay bulshadu yeeshaan, dhismaha golahii duqowda ee soo dhisi lahaa barlamaanak dowlad goboleedka Hiiraan ee Soomaaliya iyo waliba xoreynta magaalooyink akale ee Hiiraan.
· admin on May 07 2012 14:26:18 · 0 Comments · 2540 Reads ·
14,667,463 unique visits